ဖြားနာနစေဉျ မလုပျသငျ့သောအရာမြား - My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
ဖြားပွီးတဲ့သူတှရေော မဖြားရသေးတဲ့သူတှအေတှကျပါ စကားလေးနညျးနညျးပွောမယျနျော။ ဘာပွောမှာလဲဆိုတော့ ဖြားနာနစေဉျမလုပျသငျ့တဲ့အခကျြကလေးတှအေကွာငျးပွောမှာပဲ ဖွဈပါတယျ။ မဖြားသေးရငျပဲခတျေမမှီတော့မလိုဖွဈနတေဲ့ တုပျကှေးရာသီမှာ ဒီအခကျြလေးတှကေိုတော့သိထားသငျ့ပါတယျလေ။
ဖြားနာနစေဉျ မလုပျသငျ့တဲ့အရာတှကေ ဘာတှလေဲ???
၁။စောငျအထူကွီးပတျ၊လဝေငျလထှေကျမကောငျးတဲ့အနှေးထညျထူထူကွီးဝတျဆငျထားခွငျးဟာ သငျ့ကိုစမတျမဖွဈစပေါဘူး။ ကိုယျကပူရတဲ့အထဲ ၎င်းငျးတို့ကပါခန်ဓာကိုယျအပူခြိနျကိုပိုမိုမွငျ့တကျစနေိုငျပါတယျ။
၂။ဖြားနာတဲ့သူတှဟော အဖြားကွောငျ့ပါးစပျပကျြမစားခငျြရုံမက၊ဖြားရငျအစာမစားရဘူးဆိုတဲ့လှဲမှားတဲ့အယူအဆတှကွေောငျ့ပါ အစားအသောကျမဝငျတတျကွပါဘူး။ဒါဟာမှားယှငျးပါတယျ၊နာလနျထမွနျဖို့အတှကျနဲ့ ခှနျအားအတှကျ အစာအာဟာရကမရှိမဖွဈလိုအပျပါတယျ။
၃။မိမိဖာသာ အဆငျပွမေယျထငျတဲ့ဆေးမြားသောကျသုံးခွငျးဟာလဲ မလုပျသငျ့တဲ့အခကျြပဲဖွဈပါတယျ။ စပျဆေးမြား၊အခွားဖြားနာသူ လူနာမြားသောကျတဲ့ဆေးမြားကိုလိုကျလံသောကျခွငျးဟာ သငျ့ကိုပိုကောငျးဖို့ထကျ ပိုမိုဆိုးရှားစနေိုငျပါတယျ။
၄။ပဋီဇီဝ ပိုးသတျဆေးမြားအား မိမိစိတျရှိအတိုငျး(သို့)ဆေးဆိုငျမြားမှစပျပေးသညျ့အတိုငျး အလှယျတကူသောကျသုံးနခွေငျးဟာတော့ အတေျာ့ကိုမလုပျသငျ့တဲ့အခကျြပဲဖွဈပါတယျ။ ဖြားတိုငျးပိုးသတျဆေးမလိုသလို၊လိုရငျလဲ ဘယျရောဂါ၊ဘယျလူနာ၊ဘယျဆေး၊ဘယျလောကျပမာဏဆိုတာကို ဆရာဝနျကဆုံးဖွတျပွီး လိုအပျရငျညှနျးပါလိမျ့မယျ။ ကြှနျတျောကြှနျမကတော့ဖွငျ့ အမောကျဆလျေလေး၊မကျထရိုလေးဘယျလောကျသောကျလာတယျဆိုတာဟာ စမတျကိုဒေါငျးစရေုံသာမက ဆေးယဉျပါးမှုတှကေိုပါ ဖွဈပျေါစနေိုငျပါတယျ သိဘို့။
၅။ပွငျးထနျသောကိုယျလကျလှုပျရှားမှုမြားပွုလုပျခွငျးဟာလဲ ဖြားနာခွငျးကိုပိုမိုတာရှညျစပွေီး လူကိုထပျ၍ထပျ၍ပငျပနျးနှမျးလစြတေဲ့အရာပဲဖွဈပါတယျ။ တုပျကှေးကွီးနဲ့ Gymမှာ တရှူးရှူးတရှဲရှဲ၊နှပျတှထှေကျ၊မနိုငျဝနျထမျးနရေတဲ့သငျဟာ ဘျောဒီလှလှလေးမရပဲ ကံမကောငျးရငျဆေးရုံပါတနျးရောကျသှားနိုငျပါတယျ။ ဘျောဒီလှလှလေးနဲ့ ကနျြးမာသနျစှမျးခွငျးဆိုတာ ဖြားနာခြိနျရကျပိုငျးလေးနဲ့ ပြောကျပကျြမသှားနိုငျပါဘူး၊နားကွပါ။
၆။လကျကိုငျပဝါ၊အဝတျအစား၊အသုံးအဆောငျမြားကို ဖြားနာနစေဉျအခွားသူမြားနဲ့ မြှဝမေသုံးစှဲပါနဲ့၊အခွားသူတှပေါ ကူးကုနျပါလိမျ့မယျ။
၇။ဖြားနာနစေဉျ အလုပျသှား၊အပွငျထှကျခွငျးမြားဟာလဲ မလုပျရမယျ့အရာတှဖွေဈပါတယျ။ သငျမရှိမှဖွဈမယျ့အလုပျ၊နရောဆိုတာမရှိပါဘူး၊ရှိလဲ ခပြေဈပါ(နမေကောငျးဘူး၊မလာနိုငျဘူး၊လစာတိုးပေးလို့?) လူကွားသူကွားထဲသှားပွီး ကိုယျ့အတှကျလဲပငျပနျးပွီးအလုပျမတှငျ၊သူတဈပါးတှကေိုလဲရောဂါပိုးတှဖွေနျ့ပွီး ဒုက်ခပေးတာမြိုးတှမေလုပျသငျ့ဘာ။
ကဲ ကဲ အားလုံးပဲ ဖြားနာတဲ့အခြိနျမှာဒါလေးတှမေလုပျမိကွဖို့ အသိပေးပွောကွားရငျးနဲ့ တုပျကှေးဝဋျဆငျးရဲမှ ကငျးလှတျနိုငျကွပါစကွေောငျး။
ဖျားပြီးတဲ့သူတွေရော မဖျားရသေးတဲ့သူတွေအတွက်ပါ စကားလေးနည်းနည်းပြောမယ်နော်။ ဘာပြောမှာလဲဆိုတော့ ဖျားနာနေစဉ်မလုပ်သင့်တဲ့အချက်ကလေးတွေအကြာင်းပြောမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မဖျားသေးရင်ပဲခေတ်မမှီတော့မလိုဖြစ်နေတဲ့ တုပ်ကွေးရာသီမှာ ဒီအချက်လေးတွေကိုတော့သိထားသင့်ပါတယ်လေ။
ဖျားနာနေစဉ် မလုပ်သင့်တဲ့အရာတွေက ဘာတွေလဲ???
၁။စောင်အထူကြီးပတ်၊လေဝင်လေထွက်မကောင်းတဲ့အနွေးထည်ထူထူကြီးဝတ်ဆင်ထားခြင်းဟာ သင့်ကိုစမတ်မဖြစ်စေပါဘူး။ ကိုယ်ကပူရတဲ့အထဲ ၎င်းတို့ကပါခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်ကိုပိုမိုမြင့်တက်စေနိုင်ပါတယ်။
၂။ဖျားနာတဲ့သူတွေဟာ အဖျားကြောင့်ပါးစပ်ပျက်မစားချင်ရုံမက၊ဖျားရင်အစာမစားရဘူးဆိုတဲ့လွဲမှားတဲ့အယူအဆတွေကြောင့်ပါ အစားအသောက်မဝင်တတ်ကြပါဘူး။ဒါဟာမှားယွင်းပါတယ်၊နာလန်ထမြန်ဖို့အတွက်နဲ့ ခွန်အားအတွက် အစာအာဟာရကမရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါတယ်။
၃။မိမိဖာသာ အဆင်ပြေမယ်ထင်တဲ့ဆေးများသောက်သုံးခြင်းဟာလဲ မလုပ်သင့်တဲ့အချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ စပ်ဆေးများ၊အခြားဖျားနာသူ လူနာများသောက်တဲ့ဆေးများကိုလိုက်လံသောက်ခြင်းဟာ သင့်ကိုပိုကောင်းဖို့ထက် ပိုမိုဆိုးရွားစေနိုင်ပါတယ်။
၄။ပဋီဇီဝ ပိုးသတ်ဆေးများအား မိမိစိတ်ရှိအတိုင်း(သို့)ဆေးဆိုင်များမှစပ်ပေးသည့်အတိုင်း အလွယ်တကူသောက်သုံးနေခြင်းဟာတော့ အတော့်ကိုမလုပ်သင့်တဲ့အချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဖျားတိုင်းပိုးသတ်ဆေးမလိုသလို၊လိုရင်လဲ ဘယ်ရောဂါ၊ဘယ်လူနာ၊ဘယ်ဆေး၊ဘယ်လောက်ပမာဏဆိုတာကို ဆရာဝန်ကဆုံးဖြတ်ပြီး လိုအပ်ရင်ညွှန်းပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်တော်ကျွန်မကတော့ဖြင့် အမောက်ဆေလ်လေး၊မက်ထရိုလေးဘယ်လောက်သောက်လာတယ်ဆိုတာဟာ စမတ်ကိုဒေါင်းစေရုံသာမက ဆေးယဉ်ပါးမှုတွေကိုပါ ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ် သိဘို့။
၅။ပြင်းထန်သောကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုများပြုလုပ်ခြင်းဟာလဲ ဖျားနာခြင်းကိုပိုမိုတာရှည်စေပြီး လူကိုထပ်၍ထပ်၍ပင်ပန်းနွမ်းလျစေတဲ့အရာပဲဖြစ်ပါတယ်။ တုပ်ကွေးကြီးနဲ့ Gymမှာ တရှူးရှူးတရှဲရှဲ၊နှပ်တွေထွက်၊မနိုင်ဝန်ထမ်းနေရတဲ့သင်ဟာ ဘော်ဒီလှလှလေးမရပဲ ကံမကောင်းရင်ဆေးရုံပါတန်းရောက်သွားနိုင်ပါတယ်။ ဘော်ဒီလှလှလေးနဲ့ ကျန်းမာသန်စွမ်းခြင်းဆိုတာ ဖျားနာချိန်ရက်ပိုင်းလေးနဲ့ ပျောက်ပျက်မသွားနိုင်ပါဘူး၊နားကြပါ။
၆။လက်ကိုင်ပဝါ၊အဝတ်အစား၊အသုံးအဆောင်များကို ဖျားနာနေစဉ်အခြားသူများနဲ့ မျှဝေမသုံးစွဲပါနဲ့၊အခြားသူတွေပါ ကူးကုန်ပါလိမ့်မယ်။
၇။ဖျားနာနေစဉ် အလုပ်သွား၊အပြင်ထွက်ခြင်းများဟာလဲ မလုပ်ရမယ့်အရာတွေဖြစ်ပါတယ်။ သင်မရှိမှဖြစ်မယ့်အလုပ်၊နေရာဆိုတာမရှိပါဘူး၊ရှိလဲ ချေပစ်ပါ(နေမကောင်းဘူး၊မလာနိုင်ဘူး၊လစာတိုးပေးလို့?) လူကြားသူကြားထဲသွားပြီး ကိုယ့်အတွက်လဲပင်ပန်းပြီးအလုပ်မတွင်၊သူတစ်ပါးတွေကိုလဲရောဂါပိုးတွေဖြန့်ပြီး ဒုက္ခပေးတာမျိုးတွေမလုပ်သင့်ဘာ။
ကဲ ကဲ အားလုံးပဲ ဖျားနာတဲ့အချိန်မှာဒါလေးတွေမလုပ်မိကြဖို့ အသိပေးပြောကြားရင်းနဲ့ တုပ်ကွေးဝဋ်ဆင်းရဲမှ ကင်းလွတ်နိုင်ကြပါစေကြောင်း။